sawarima | सवारी गर्नुहोस्
एक आश्चर्यजनक प्राप्त गर्नुहोस् टैक्सी सवारी
ट्याक्सी अनुप्रयोग डिजाइन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको मानिसहरूलाई सेवा गर्नु हो। अचम्मको ट्याक्सी सेवा शहरको गौरव हो। विगत केहि बर्षदेखि, यी असक्षम क्याबहरूले व्यक्तिहरूलाई उनीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाँउमा लैजान धेरै मद्दत गरेको छ। सडकहरू यी ट्याक्सी सेवाहरू बिना नै देखिन्छन्।
sawarima ट्याक्सीमा काम गर्दै
sawarima ट्याक्सीको काम एकदम सरल र सजिलो छ। sawarima ट्याक्सी अनुप्रयोग प्रयोग गर्नको लागि तल उल्लेखित चरणहरू छन्।
आफूलाई दर्ता गर्नुहोस् तपाईंको ईमेल ठेगाना, फोन नम्बर वा कुनै पनि सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म प्रदान गरेर अनुप्रयोगमा दर्ता गर्नुहोस्।
स्थान विवरण प्रदान गर्नुहोस् तपाईंको छनौट र ड्रप स्थान प्रदान गर्नुहोस्
वाहन प्रकार छनौट गर्नुहोस् गाडीको कोटी छनौट गर्नुहोस्। यो प्राइम सेडान कार वा साधारण मिनी कार हुन सक्छ।
तपाईंको सवारीको मजा लिनुहोस् सेवाको मजा लिनुहोस् र भुक्तानी गर्नुहोस्। अन्तमा, तपाईंको प्रतिक्रिया र समीक्षा दिनुहोस्।
यात्रा हिसाब गर्नुहोस्
हामी ग्राहकहरु लाई सन्तोषजनक र मनमोहक सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छौं। चाहे तपाई महत्त्वपूर्ण व्यापार बैठकमा जानु पर्ने छ वा विवाह समारोहमा भाग लिनुपर्दछ, सबै कुरा हाम्रो फोनमा केही साधारण क्लिकहरूको साथ सम्भव छ। ट्याक्सी सेवाहरूको साथ हामी खाना वितरण सेवा, बाइक ट्याक्सी सेवा, कार भाडा विकल्पहरू, इत्यादि प्रदान गर्दछौं।
ग्राहकहरु संग छनौट गर्न विकल्पको बिभिन्न विविधता छ। तिनीहरू सेडान कार वा एक आश्चर्यजनक SUV विकल्प छनौट गर्न सक्दछन्।
सेवा पूरा भएपछि ग्राहकले कति तिर्ने भन्ने बारे अनुमान गर्न भाडा प्रदान गरिन्छ।
ग्राहक सेवा समर्थन
यदि कुनै ग्राहकले ट्याक्सी सेवाको बारेमा कुनै पनि प्रकारको समस्या सामना गर्यो भने उनीहरूले तुरून्त ग्राहक सेवा कार्यकारीलाई सम्पर्क गर्न सक्दछन्। २ / / c ग्राहक देखभाल सहायता उनीहरूलाई प्रदान गरिएको छ।
सामाजिक मिडिया लगईन
यस सुविधाले राइडर्सलाई फेसबुक, लिked्क ईन र Google+ प्रयोग गरी सहज रूपमा लगइन गर्न सशक्त गर्दछ।
सवारी चयन विकल्प
राइडरहरूले गाडीको विकल्प पाउनेछन् जुन उसले ह्याचब्याक, एसयूवी वा सेडान बुक गर्न सक्छ।
राइडर्सले सवारी भन्दा पहिले भाडा हिसाब गर्न सक्दछ पिकअपको आधारमा राईड र प्रविष्ट प्रविष्ट स्थानहरू ड्रप अफ।
अब सवारी गर्नुहोस् वा पछि सवारी गर्नुहोस्
राइडर्सले ट्याक्सीलाई अहिले बुक गर्न सक्दछ वा पछि समयको लागि सवारी तालिका बनाउन सक्दछ।
ईमेल र मोबाइल प्रमाणीकरण जालसाजीबाट बच्न गरिन्छ।
SOS Panic बटन
प्रयोगकर्ताहरूले SOS बटन प्रेस गर्न सक्छन् आपतकालीन स्थितिमा ट्रिपको बखत।
किओस्क अनुप्रयोगको साथ होटल रिसेप्शनबाट सवारीको उपलब्धता
होटल रिसेप्शनबाट सवारी बुकिंग गर्न यात्रुहरूलाई सहयोग गर्ने समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ र एकै साथ होटलहरू हरेक पटक होटेल रिसेप्शनबाट सवारी बुक गर्दा कमिसन कमाउन पनि मद्दत गर्दछ? त्यसो भए, हामीसँग साझेदारी गर्न उत्साहजनक समाचार छ! हाम्रो ट्याक्सी कियोस्क अनुप्रयोगको साथ, यात्रुहरूले बस आफ्नो ट्याक्सी र ड्रप स्थान टाइप गरेर होटेल रिसेप्शनमा उपस्थित ट्याक्सी कियोस्क एप्लिकेसनबाट सवारी बुक गर्न सक्दछन् र केही मिनेटमा सवारी प्राप्त गर्न सक्दछन् र जहाँ कही छोटो समयमा उनीहरूलाई चाहिने ठाउँमा जान सक्छन्। तपाईलाई पहिलो दिनबाट नै अचम्मको मुनाफा बनाउन मद्दत गर्दछ!
त्यसोभए, आज यस समाधानको एन्ड्रोइड प्ले स्टोर र आईओएस अनुप्रयोग स्टोरमा प्रस्तुत गर्नुहोस् र तपाईंको व्यापारको आकाशको उचाइमा पुग्ने हेर्नुहोस्!
त्यहाँ अनुप्रयोगको माध्यमबाट वाहनका विविध प्रकारका उपलब्ध छन्। चाहे तपाई एसयूवी कार वा प्राइम सेडान कार भाडामा लिन चाहानुहुन्छ, सबै यो अनुप्रयोग मार्फत सम्भव छ।
अब अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईका हातका हत्केलाका साथ उत्तम र परेशानी-मुक्त सवारीको आनन्द लिन सुरू गर्नुहोस्। हाम्रो अनुप्रयोग आईओएस, एन्ड्रोइड र विन्डोज जस्तो विभिन्न प्लेटफर्महरूसँग उपयुक्त छ। हाम्रो अनुप्रयोगको केहि आश्चर्यजनक सुविधाहरू हुन्।
सामाजिक मिडिया एकीकरण
सजिलो लगईन र दर्ता आदि।
एक सुन्दर पैसा कमाउनुहोस्
हाम्रो ड्राइभर शुद्ध पेशेवर व्यक्ति हुन् र साथै सवारहरूलाई विश्वसनीय र सुरक्षित सवारी प्रदान गर्दछ। भ्रष्ट मुफ्त सेवा प्रस्तावको साथ, एक सजिलै लाभ को एक राम्रो रकम कमाउन सक्नुहुन्छ।
सुरक्षित र सुरक्षित सवारी, सँधै
ड्राइभरहरू ग्राहकहरूको सुरक्षाको बारे निश्चित गर्न उनीहरूको आपराधिक रेकर्डहरू र औषधि परीक्षणहरूको आधारमा जाँच गरिन्छ।
ट्याक्सी बुक गर्न हामीलाई कल गर्नुहोस्
यो सुविधा विशेष गरी उपयोगी छ जब खानपानको लागि ईन्टरनेट वा स्मार्ट फोनको पहुँच छैन। फोन कलमार्फत ट्याक्सी बुक गर्नुहोस् र राइडको मजा लिनुहोस्।
© Copyright 2020 @Sawarima